Paul Scholes Oo Shaaciyay Arin Qariib Ah Oo Uu Sameeyay Kulamadiisii Ugu Danbeeyay Ee Uu Lionel Messi Ka Hor Yimid. - Gool24.Net
Paul Scholes Oo Shaaciyay Arin Qariib Ah Oo Uu Sameeyay Kulamadiisii Ugu Danbeeyay Ee Uu Lionel Messi Ka Hor Yimid.
September 11, 2019 Mahamoud Batalaale
Halyaygii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka England ee Paul Scholes ayaa sameeyay qirasho layaableh kadib markii uu soo bandhigay arin uu sameeyay kulamadii ugu danbeeyay ee uu Lionel Messi ka hor yimid.
Paul Scholes oo hadda ka mid ah khabiirada kubbada cagta falanqeeya ee dalka England ayaa sheegay in kulamadii ugu danbeeyay ee uu Lionel Messi ka horyimid uu si badheedh ah iskaga ilaalinayay in uu si toos ah uga horyimaado Messi.
Paul Scholes ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ugu muhiimsanayd ee uu Sir Alex Ferguson kala hor yimid kooxdii Pep Guardiola ee kulamadii Champions league laakiin waxa uu hadda Scholes aduunka u soo bandhigay cabsidii uu Lionel Messi ka qaaday.
Paul Scholes ayaa si aan gabasho lahayn u qirtay in uu ka taxadarayay in uu si fool-ka-fool ah uga hor yimaado Lionel Messi wuxuuna ku dooday in shaki la’aan uu Messi yahay xidigii abid ugu fiicnaa kubbada cagta.
Scholes ayaa si gaar ah u soo qaatay finalkii UEFA Champions league ee ay Barcelona koobka kooxaha Yurub ka qaaday kooxdiisii Man United isaga oo aan wax ceeb ah u arkin in uu Lionel Messi ka cabsanayay.
Inkasta oo uu Paul Scholes ka soo garab ciyaaray Cristiano Ronaldo iyo xidigo badan oo magac wayn kubabda cagta ku soo yeeshay, haddana waxa uu qirtay cabsidii uu Messi ka qabay.
Pual Scholes oo si aan gabasho lahayn u soo bandhigay arintii uu sameeyay si aanu Lionel Messi si toos ah uga hor iman wuxuuna yidhi: “Aniga ceeb iguma aha in aan qirto arintan, laakiin finalkayagii ugu danbeeyay ee ka dhanka ahaa Barcelona, waxaan isku dayay in aanan u dhawaan goobta Messi si aan uga dheeraado xaalad hal-ka-hal ah”.
Pual Scholes ayaa ku dooday in Lionel Messi uu shaki la’aan yahay xidigii abid ugu fiicnaa kubbada cagta wuxuuna yidhi: “Shaki la’aan isagu waa ciyaartoyogii waqtiga oo dhan ugu fiicnaa”.
Pual Scholes ayaa hore u qirtay in si walba oo ay iskugu dayeen in ay Lionel Messi joojiyaan in ay u maaro waayeen waqtigii uu Guardiola maamulayay kooxda Barcelona.
Ma aha xidigii ugu horeeyay ee Manchester United kaga hor yimid Lionel Messi ee arintan oo kale qirtay, balse Rio Ferdinand ayaa isna hore u sheegay in xataa uu isku dayay in uu qalad ku joojiyo Messi balse uu garan waayay dhinaca uu ka dhaafay.